Global Voices teny Malagasy » Fitetezana Ny Tontolon’ny Bilaogy Kiorda · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Aogositra 2017 8:15 GMT 1	 · Mpanoratra Deborah Ann Dilley Nandika Lauren RAJAOBELINA
Toa ohatra ny nangingiana ny tontolon'ny bilaogy kiorda tamin'ity herinandro ity raha oharina tamin'ny herinandro lasa. Nifantoka tamin'ny fitsaràna / ho fitsaràna an'i Saddam Hussein ny ankamaroan'ny Kiorda. Mpitoraka bilaogy anankiray, Kurdo avy amin'ny Kurdo's World no nanamarika fa taorian'ny nijereny ny andro voalohany tamin'ny fitsarana… hoe tsy rariny ho an'ireo lasibatr'i Saddam ilay izy.  Nanome antony 3 izy :
Tsy gaga  i Hiwa, mpitoraka bilaogy iray hafa avy amin'ny Hiwa Hopes, nitantara ny fandehan'ilay fitsarana, raha tafavoaka “madiodio” tramin'ilay fitsaràna i Saddam noho ny antony teknika sasany toy ireo mpandika teny ho an'ny fitsaràna. Na izany aza, misy ireo fitsaràna hafa andrandraina. Ohatra, natomboka tamin'ny Alatsinainy ny fitsaràna ilay holandey iray mpandraharaha, Frans van Anraat, izay voampanga ho niray tsikombakomba tamin'ny ady heloka bevava sy fandripahana olona tamin'ny fivarotana vokatra simika tamin'i Iràka  (nefa nahafantatra fa mety ho ampiasain'i Saddam Houssein izany mba hanaovana fanafihana amin'ny entona misy poizina). Araka ny nampanantenaina, nandika ihany koa ireo fanambaràna nataon'ireo vondrona maroben'ny antoko Kiorda i Hiwa, dia ireo mifaninana amin'ireo fifidianana ho avy amin'ny faha-15 desambra, ny Fanambaràna ny Firaisan'ny Kiorda  no tamin'ity herinandro ity.
Notsikerain'ny Iraqi Vote  ihany koa ny resaka mafàna mifandraika amin'ny fifidianana amin'ny Desambra, isan'izany ny filazàna fohy ny mombamomba an'i Hamid al-Kiffaey mpitarika ny hetsika ho an'ny fiarahamonina demokratika. Nohazavainy ihany koa ny antony mahatonga ny Kiorda hanohitra ilay volavolam- panesorana ny zo tsimatimanota parlemanteran'ilay Minisitry ny fiarovam-pirenena teo aloha, Hazim al-Sh’alan.  Notsikerain'ny Iraqi Vote tahaka izany ihany koa ny Kiorda, tamin'ny fandefasana ny fitsaràna an'i Saddam amin'ny fahitalaviatra. 
Asa mendrika, ezaka famaritana ny fahasamihafàna amin'ireo politika Kiorda any Iràka Avaratra/ Kiordistàna Atsimo no ataon'ny Is-Ought Problem amin'ity herinandro ity. Ohatra, Jalal Talabani, izay Kiorda nefa filohan'i Iràka am-perin'asa, dia nanao fanambaràna vao haingana fa angamba tsy mety ny fanjakana Kiorda mahaleotena. Nosoniaviny ihany koa ny fifanarahana miaraka amin'ny Ligy Arabo izay mamaritra mazava ny toetry ny fanoherana sy ny fampihorohoroana, fifanarahana azo adika hoe fandraràna ny famonoana olona raha toa ka tsy fampihorohoroana no ataon'ireo olom-pirenena tsy irakiana fa fanoherana ara-dalàna.  Fa nilaza kosa i Masoud Barzani, lehiben'ny governemantam-paritra kiorda, fa tsy azo heverina ho “Fanoherana” ny fanafihana atao amin'ireo tafika avy any ivelany.  Toa fiheveran-diso mahazatra ny hoe miray saina amin'ny zavatra rehetra ny kiorda, ary asa tsara no nataon'ny Is-Ought Problem tamin'ny fanehoana fa tsy izany no zava-misy.
Any ivelan'ny fanjakan'i Kiordistàna Atsimo, dia tantarain'i Bleak Blogorrhea ny momba ilay hetsi-panoherana nataon'ireo mpianatra tany Atsinanan'i Kiordistàna/ Andrefan'i Iràna sy ny momba ireo asatànana avy amin'io faritra io . Omeny ihany koa ny rohin'ny Firaisan'ny Vondrom-piarahamonina Kiorda any Ottawa izay vao niforona vao haingana.
“Hatrany Holandy ka hatrany Kiordistàna” dia manana ilay lahatsoratra mitantara ny nandaozan'ny Praiminisitra Tiorka, Recep Tayyip Erdogan ilay valan-dresaka vao haingana ho an'ny mpanao gazety rehefa reny fa manatrika ao ireo mpitati-baovaon'ny Kurdish Roj TV  any Danemarka. Koa satria tsy mbola hita izay tsaho sy marina amin'ity tantara ity, dia teraka ny vazivazy manakorontan-tsaina momba ny Piraiminisitra. Ary satria nambarako fa hiala lavitra ny Kiordistàna Irakiana isika, dia tiako foana ny mitarika anareo ho aminà lahatsoratra mahafinaritra ananan'ny “Hatrany Holandy ka hatrany Kiordistàna” momba ny fanaovana an'i Kiordistàna ho Iràka.
Nifantoka tamin'ny fahitàna bilaogy vaovao kiorda maro ny votoatin'ny Fiombonan'ny mpitoraka bilaogy any Kiordistàna tamin'ity herinandro ity, isan'izany ny rohy amin'ny teny Kiorda mankany amin'ny Wikipedia.  Raha toa ka efatra no fantatra, dia ny roa amin'ireo bilaogy vaovao ireo ihany no amin'ny teny Anglisy sy ampidirina amin'ity lahatsoratra ity. Ny mahaliana amin'ireto bilaogy vaovao 2 ireto dia samy tamin'ity herinandro ity no nanombohany, ary hitako, izaho manokana, fa mahaliana ny mahita ny fahaterahan'ireto bilaogy ireto. Nefa, tahaka ny zaza / tetikasa vaovao rehetra, dia tsy azo atokisana foana ny fahamarinany aty am-piandohana. Samy lahatsoratra mandrakotra ny faritr'i Kiordistàna manontolo amin'ny velarany ny azy roa ireto ary toa ho sarotra ny maminavina sy manasokajy ny toerana hisy azy amin'izao fotoana izao, fa na izany aza, heveriko fa, tsy ho ela, hahita Rasti  sy Welcome to the East of Kurdistan (Tonga soa aty Kiordistàna Atsinanana)  marobe isika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/29/105453/
 taorian'ny nijereny ny andro voalohany tamin'ny fitsarana… hoe tsy rariny ho an'ireo lasibatr'i Saddam ilay izy.: http://kurdo.blogspot.com/2005/11/saddam-trial-stayed-in-all-day.html
 Tsy gaga : http://hiwakan.blogspot.com/2005/11/i-wouldnt-be-surprised-if-he-walks-out.html
 voampanga ho niray tsikombakomba tamin'ny ady heloka bevava sy fandripahana olona tamin'ny fivarotana vokatra simika tamin'i Iràka : http://hiwakan.blogspot.com/2005/11/they-all-need-to-face-same-he-wasnt.html
 Fanambaràna ny Firaisan'ny Kiorda: http://hiwakan.blogspot.com/2005/11/kurdistan-alliance-lists-manifesto.html
 Iraqi Vote: http://iraqivote.blogspot.com/
 Hamid al-Kiffaey mpitarika ny hetsika ho an'ny fiarahamonina demokratika. : http://iraqivote.blogspot.com/2005/11/profile-hamid-al-kiffaey.html
 panesorana ny zo tsimatimanota parlemanteran'ilay Minisitry ny fiarovam-pirenena teo aloha, : http://iraqivote.blogspot.com/2005/11/immunity-for-hazim-al-shalan.html
 tamin'ny fandefasana ny fitsaràna an'i Saddam amin'ny fahitalaviatra.: http://iraqivote.blogspot.com/2005/11/tyrant-on-trial.html
 lahatsoratra tena lafatra miaraka amin'ireo tahirin-kevitra sy porofo : http://northerniraq.info/blog/?p=16
 angamba tsy mety ny fanjakana Kiorda mahaleotena. : http://theisoughtproblem.blogspot.com/2005/11/talabani-independent-kurdish-state-not.html
 fandraràna ny famonoana olona raha toa ka tsy fampihorohoroana no ataon'ireo olom-pirenena tsy irakiana fa fanoherana ara-dalàna.: http://theisoughtproblem.blogspot.com/2005/11/iraqi-leaders-killing-non-iraqi.html
 tsy azo heverina ho “Fanoherana” ny fanafihana atao amin'ireo tafika avy any ivelany.: http://theisoughtproblem.blogspot.com/2005/11/kurdistan-president-attacks-on-foreign.html
 hetsi-panoherana nataon'ireo mpianatra tany Atsinanan'i Kiordistàna/ Andrefan'i Iràna : http://bleak-blogorrhea.blogspot.com/2005/11/eastern-kurdistan-students-protest.html
 asatànana avy amin'io faritra io: http://bleak-blogorrhea.blogspot.com/2005/11/kurdish-backgammon.html
 Firaisan'ny Vondrom-piarahamonina Kiorda any Ottawa : http://bleak-blogorrhea.blogspot.com/2005/11/kurdo-canadians.html
 nandaozan'ny : http://vladimirkurdistan.blogspot.com/2005/11/turkey-suffers-from-bird-flu-to.html
 bilaogy vaovao kiorda maro : http://kurdistanblog.blogspot.com/2005/11/new-blog-found.html
 Fiombonan'ny mpitoraka bilaogy any Kiordistàna : http://kurdistanblog.blogspot.com
 rohy amin'ny teny Kiorda mankany amin'ny Wikipedia.: http://ku.wikipedia.org/wiki/Ser%C3%BBpel
 ny roa amin'ireo bilaogy vaovao ireo ihany no amin'ny teny Anglisy : http://kurdistanblog.blogspot.com/2005/11/wait-3-more-new-blogs-found.html
 Welcome to the East of Kurdistan (Tonga soa aty Kiordistàna Atsinanana): http://eastkurd.blogspot.com/